Nke a bụ ụbọchị ọhụụ maka Realme Narzo 10 na 10A | Gam akporosis
Mwepụta gọọmentị nke Realme Narzo 10 na 10A enweela ụbọchị ọhụụ
Naanị otu ụbọchị anyị ga-enye gị nnabata obi ụtọ na ngwaọrụ Realme ọhụrụ, nke bịara dịka Narzo 10 na Narzo 10A.
E chere na Ekwentị abụọ ga-amalite na India na Machị 26. Onye mepụtara China ahụ kwupụtara na Machị na ụbọchị ahụ ga-abụ nke onye nnukwu Asia ga-amata ha, mana ọ tụghị otu ahụ n'ihi na gọọmentị mpaghara, iji gbochie mgbasa nke coronavirus, kpebiri iji mejuputa mgbochi nke mba.
Echi ka a ga-ebido Realme Narzo 10 na 10A
Así es. Otu Eprel 21 a, ụbọchị nke ga-echi, Realme ga-emecha malite Narzo 10 na 10A ọhụrụ. Ihe ngosi a ga-eme na India ma ọ ga-ewere ọnọdụ na 12: 30pm (oge mpaghara). A ga-eme ihe omume ahụ na ntanetị ma ụlọ ọrụ ahụ ga-agbasa ozi na ntanetị na YouTube na Facebook. Site na nyiwe abụọ ọ ga-ekwupụta njirimara niile na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị abụọ a, yana nkọwa nke ọnụ ahịa na nnweta.
Dị ka asịrị na ụlọ ọrụ ịkọ nkọ na-adịghị ezu ike, Narzo 10 usoro ga - egosiputa mkpebi ihuenyo 6.5-inch HD + na nkwado maka akara ngosi 20: 9 dị warara. Ọ ga-abịa na ọkwa mmiri yiri nke mmiri. N'aka nke ya, ekwuru na Realme Narzo 10 nwere 4GB RAM, 128GB nke ebe nchekwa dị n'ime, 16-megapixel camera n'ihu, na 48 -pipixel quad camera setup.
Nginggbanwe nkọwa nke obi ike na nke pụrụ iche, # realmeNarzo10 na # realmeNarzo10A edoziri ka ekpughee ha!
Lelee vidio vidiyo na ntanetị na 12: 30PM, 21st Eprel na ọwa gọọmentị anyị. https://t.co/Oe2ajoK9up pic.twitter.com/oTvSYGvMyF
- realme (@realmemobiles) April 17, 2020
N'aka nke ọzọ, ekwuru na Narzo 10A bụ ama ama ama ama nke ekwentị Realme C3 nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya n'ahịa dịka Indonesia na Thailand. Ọ ga-akwado ya site na MediaTek Helio G70 chipset, 4GB nke RAM, 64GB nke nchekwa, 5-megapixel selfie igwefoto na 12-megapixel okpukpu atọ ese foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mwepụta gọọmentị nke Realme Narzo 10 na 10A enweela ụbọchị ọhụụ
Ejiri nkwenye ụda okwu abụọ nke iQOO Neo3 kwenye
Nkọwapụta ọkwa nke Oppo A52 apụtawo tupu ya amalite